Benzema Oo 6 Sanno Kaddib U Safanaya Faransiiska – Garsoore Sports
Benzema Oo 6…
Lix sano kaddib markii laga ceyriyay xulka qaranka Faransa, weeraryahanka Real Madrid Karim Benzema ayaa qarka u saaran inuu dib ugu soo laabto safka macalin Didier Deschamps ee xagaagan ka qeyb galaya Koobka Qaramada Yurub.
Benzema ayaan u ciyaarin xulka Faransa tan iyo bishii Oktoobar 2015, kaddib markii lagu qabsaday eedeyntii uu u diray saaxiibkiis Mathieu Valbuena oo uu ku eedeeyay inuu ka duubay cajalad galmo ah – fadeexad wali ka socota maxkamadaha ilaa haatan.
Ka reebitaankiisa Xulka ayaa noqota mid fool xun mararka qaar, iyadoo guriga Tababare Deschamps lagu bartilmaameedsaday qoraallo lagu eedeeyay inuu cunsuriyad ku yahay Benzema iyo dadka kale ee ka soo jeeda waqooyiga Afrika, sidaa darteed waxaa si weyn loo aaminay in Benzema uusan waligiis xiran doonin maaliyadda buluugga ah ee Faransiiska markale.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay majaladda L’Equipe ee magaalada Paris kasoo baxda, Benzema wuxuu ku soo laabanayaa xulkiisa isagoo kala qeybgalaya Tartanka Qaramada Yurub ee xagaaga.
Deschamps ayaa la fahamsan yahay inuu la dhacsan yahay xiddigan oo 29 gool iyo sideed caawin ah sameeyay 45 kulan oo uu u saftay Real Madrid xilli ciyaareedkan, haatanna fikradda ah in Benzema uu ka mid noqdo safkiisa Euro 2020 ayaa ku jirta maskaxdiisa.
Waxay noqon doontaa wax lala yaabo marka la arko Benzema oo kusoo laabanaya qaranka Faransa xagaagan maadaama tababarahan uu caan ku yahay inuu si kedis ah oo aan la fileynin ugu yeero cayaartooyda mararka qaar.